Sarkaal Boolis ah oo Gabar Madow ku toogtay Magaalada Ohio ee Dalka Mareykanka Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaSarkaal Boolis ah oo Gabar Madow ku toogtay Magaalada Ohio ee Dalka Mareykanka
Sarkaal Boolis ah oo Gabar Madow ku toogtay Magaalada Ohio ee Dalka Mareykanka
April 21, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Caalamka 0
Sarkaal booliis ah ayaa magaalada Ohio ku toogtay gabar madow ah oo dhalinyaro ah xilli ay ka jawaabeysay isku day dil mindi ah.
Toogashada ayaa ka dhacday magaalada Ohio baarihii 16:45 ee waqtiga magaaladaas Talaadadii, sida uu sheegay wargayska Columbus.
Booliska Columbus ayaa markii dambe soo saaray muuqaal ka turjumaya sida ay wax u dheceen, oo muujinaya dad dhowr ah oo weeraraya qof ka hor inta aan gabadha la toogan dhowr jeer.
Baaritaan ayaa socda, iyadoo saraakiisha ay ku boorriyeen dadka deegaanka inay isdajiyaan.
Duhurnimadii gabadh yar ayaa musiibadan nafteeda ku wayday. Ma ogin faahfaahinta oo dhan, “ayuu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray Duqa Columbus Andrew Ginther. “Waxaan la wadaagi doonnaa macluumaadka aan awoodno isla marka ay soo baxaan,” ayuu raaciyay.
Dhacdadaan ayaa imaanaysa xilli ay xeer-beegti ay sarkaal hore oo booliis ahaa ku heshay dambi ah in sannadkii hore uu waddo ku taal Minneapolis ku dilay George Floyd oo ahaa nin madoow oo Maraykan ah.
Derek Chauvin, oo 45 jir ah, ayaa muuqaal laga duubay asagoo in ka badan sagaal daqiiqo jilibka qoorta kaga haya Mr Floyd oo la doonayey in la xiro bishii May.
Muuqaalkaas oo si weyn loo daawaday ayaa caro iyo dibadbaxyo looga soo horjeedo midab-takoorka iyo awoodda xad dhaafka ah ee booliska ka dhaliyey caalamka oo dil.
Chauvin ayaa lagu helay dambi ah in si ula kac ah uu u dilay George Floyd.